Shirkadda Aeroflot ayaa baajisay dhammaan duulimaadyadii Bangkok sababo la xiriira khatarta hawada Afghanistan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Shirkadda Aeroflot ayaa baajisay dhammaan duulimaadyadii Bangkok sababo la xiriira khatarta hawada Afghanistan
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Mar dambe suurtogal maaha in tigidh laga soo iibsado Moscow ilaa Bangkok bisha Sebtember ama Oktoobar ee sannadkan bogga Aeroflot.
Markab sidda calanka Ruushka ayaa joojiyay adeegyadii hawada Bangkok.
Aeroflot waxay ka fogaataa hawada Afghanistan, waxay faasataa duulimaadyada Thailand.
Thailand waxay oggolaatay shahaadada tallaalka Ruushka ee gelitaanka dalxiiska.
Diyaaradda Aeroflot ee calanka Ruushka ayaa baajisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay caasimadda Thailand ee Bangkok, sababo la xiriira khatarta ka jirta hawada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Afghanistan.
Mar dambe suurtagal ma aha in tigidh laga soo iibsado Moscow ilaa Bangkok bisha Sebtember ama Oktoobar ee sanadkaan Aeroflot bogga internetka. Boos celinta duullimaadka Bangkok waxay furan tahay oo keliya ilaa Ogosto 21, 2021.
Waxaa la yaab leh, mas'uuliyiinta Thai ayaa ku dhawaaqay maanta oggolaanshaha dhow ee la siiyay dalxiisayaasha Ruushka soo galaya Thailand oo wata shahaadada tallaalka COVID-19 oo leh tallaalka Sputnik V ee Ruushku sameeyay.
Markii hore, dadka safarka ah ee aan haysan shahaadada tallaalka COVID-19 mid ka mid ah tallaallada reer Galbeedka laga aqoonsan yahay, sida Moderna, Pfizer ama AstraZenica, waa inay maraan karantiil laba toddobaad ah oo khasab ah.
Waqtigan xaadirka ah, cirka Afgaanistaan ​​waa mid aad halis u ah dhaqdhaqaaqa argagaxisada Taliban, oo la wareegay awoodda jamhuuriyadda.
Axaddii, 15 -kii Ogosto, caasimadda Afghanistan ee Kabul, waxaa gacanta u gashay kooxda Taliban. Hadda waxaa jira hadal ka soo baxay Madaarka Caalamiga ah ee Hamid Karzai ee Kabul, iyadoo ay buux dhaafiyeen dad deegaanka ah oo isku dayaya inay ka duulaan dalka, si ay uga baxsadaan xukunka Taliban.
Duulimaadyada ka baxa Kabul waa kuwo goos goos ah oo had iyo jeer si joogto ah u socda oo u maqan maaddaama Taliban ay marmar 'hakiso' dhammaan duullimaadyada ka baxa magaalada.